မော်ကွန်းတိုင် Browser ကို: Adblock & Fast Downloads | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » မော်ကွန်းတိုင် Browser ကို: Adblock & Fast Downloads
မော်ကွန်းတိုင် Browser ကို: Adblock & Fast Downloads APK ကို
အစာရှောင်ရာကို download acceleration ကိုအင်္ဂါရပ်တွေနဲ့ပေါင်းစပ်တစ်ခု Adblock browser ကိုသင်လိုအပ်သမျှဖြစ်လိမ့်မယ်။
မော်ကွန်းတိုင် Browser ကိုသင့်ရဲ့ downloads, အလွန်အစာရှောင်ခြင်းလုပ်နှင့်သင့် bandwidth ကိုအပြည့်အဝအသုံးကြောင်းသေချာစေရန်မျိုးစုံဆက်သွယ်မှုအသုံးပြုသည်။ ကြောင့်ကွန်နက်ရှင်ဆုံးရှုံးမှု, မမျှော်လင့်ဘဲပိတ်ဆို့ခြင်းသို့မဟုတ်ကွန်ရက်ပြဿနာများပြတ်တောက်ခဲ့ပြီးသော downloads, ပြန်လည်စတင်ခြင်းနှင့် restart ချလိုက်ပါ။
မော်ကွန်းတိုင် Browser ကိုအထူးသဖြင့် Android အတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည်။ တစ်မြန်ဆန်စီမံခန့်ခွဲရန်လွယ်ကူခြင်းနှင့်သန့်ရှင်းတဲ့ဘရောက်ဇာကိုသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုကြွင်းသောအရာမှထွက်မတ်တပ်ရပ်စေရန်ဒီဇိုင်းနှင့်ထူးခြားသောသီးသန့် features တွေပေါင်းစပ်အတူ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Adblock အားဖြင့်သင်တို့ကိုကြော်ငြာတွေ, လုပ်ကွက်မလိုချင်တဲ့နှင့်ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသောကြော်ငြာလမ်းကြောင်းလွှဲအခမဲ့သွားလာနိုင်ပါတယ်။
Adblock optimization ။
ကြော်ငြာတွေ & မလိုချင်တဲ့အကြောင်းအရာထောက်လှမ်း၏ထိရောက်မှုကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်, သင်တို့ကိုလည်းကြော်ငြာတွေအဖြစ်သင့်ကိုယ်ပိုင်ထုံးစံပိတ်ဆို့ခြင်းစာရင်းနှင့် bookmark ကိုစာမကျြနှာမြားနှငျ့ဆိုက်များက်ဘ်ဆိုက်များကိုထည့်သွင်းဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
Android အတွက်အကောင်းဆုံး Downloader ကို။
သင့်ရဲ့ download speed ကတိုးပှားနှင့်သင့် bandwidth ကိုအပြည့်အဝအသုံးကြောင်းသေချာစေရန်
အဆင့်မြင့်ဒေါင်းလုပ် features တွေ
☆ (32 ဆက်သွယ်မှုအထိ) မျိုးစုံဆက်သွယ်မှုကို အသုံးပြု. အရှိန်နှင့်အတူတစ်ပြိုင်တည်းဖိုင်များကို Download
အဆိုပါအကြောင်းကြားစာ panel ကိုအတွက်အခြေအနေနှင့်တိုးတက်မှုနှင့်အတူနောက်ခံ☆ဒေါင်းလုပ်ဖိုင်တွေ
☆ကြားဖြတ် download link များ (ပွင့်လင်း menu နဲ့ဒေါင်းလုပ်မီဒီယာကိုကလစ်နှိပ်ပါ)
သငျသညျ (က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်မူတည်သည်) ချင်အခါတိုင်း☆သင့်ရဲ့ downloads, ပြန်လည်စတင်မည်။
☆ကွန်နက်ရှင်ပျက်ကွက်၏အမှု၌သင်၏အ download link ကိုပြင်ရန်
မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့သင် browsing ကိုလက်စသတ်သောအခါအားလုံးသင့်ရဲ့ဒေတာတွေကိုဖျက်ပစ်ရန်အပလီကေးရှင်းကို configure နိုင်ပါတယ် setting ရိုးရှင်းသောနှင့်အတူ, ငါတို့သည်သင်တို့၏သတင်းအချက်အလက်မှကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၏တစ်ဦးအပိုဆောင်းအလွှာကဆက်ပြောသည်ပါတယ်။
access ကိုမှအော့ဖ်လိုင်းအပြည့်အဝကျဘျစာမကျြနှာကို Save သင်တို့သည်နောက်အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုရှိလျှင်ပင်။
full-screen သာ. ကောင်း၏။
အဆိုပါ Full-screen mode ကိုဒီ AMOLED ဖန်သားပြင်ပေါ်မှာမီးလောင်-in ကိုတားဆီးနိုင်ပါတယ် (သင်သွားလာမှုဘားဖုံးကွယ်နိုင်သည့်ကိရိယာများပေါ်တွင်) သင်တို့အဘို့ကို web content ကိုဖော်ပြရန်သင့် screen ၏ 100% ကိုသုံးနိုင်သည်။
သင့်ရဲ့ privacy ကိုထွက်ပေါက်အပေါ်သို့သင့်ရဲ့အညွှန်း data တွေကိုရှင်းလင်းရေးသို့မဟုတ်သင်တဲ့အခါမှာ app ကိုပြန်လည်စတင်အဲဒီ session ထဲကဒေတာအားလုံးကိုဖျက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂလိက session ကိုသုံးနိုငျတဲ့ setting များကို option ကို enable လုပ်ဖို့အနည်းငယ်ကလစ်နှင့်အတူကာကွယ်ပါ။
လွယ်ကူစွာ mode ကို။
ညဥ့် Mode ကို။
သင်အလွယ်တကူဖတ်လို့ရအောင်ဖြစ်ဝဘ်စာမျက်နှာများကိုညိုမည်းလာနေသည်, ညအချိန်တွင်တစ်ခုသို့မဟုတ် Low-အလင်းပတ်ဝန်းကျင်အတွက်အကောင်းဆုံး browsing အတွက်အတွေ့အကြုံအရကူညီပေးသည်။
သင်သည်အခြားတာဝန်များကို (က Android 8.0 Oreo နှင့်သဟဇာတ) အတွက်အကြောင်းအရာပြန်ဖွင့်ရပ်တန့်ရန်မလိုပါဒါကြောင့်သင် full-screen ကိုဗွီဒီယိုနဲ့အိမ် button ကိုကြည့်ရှုသည့်အခါအလိုအလြောကျမြှင့်လုပ်ဆောင်သောလျော့ချအမြင် mode ကို, ဖိနေပါတယ်။
တစ်ချိန်တည်းမှာမျိုးစုံတာဝန်များကိုလုပ်ဆောင်ဖို့ပေါ့ပ်အပ်အတိုင်း browser ကိုအတွင်းမျိုးစုံပြတင်းပေါက်သုံးပါ။
အရွယ်အစား 2MB ထက်လျော့နည်းနှင့်အတူ, မော်ကွန်းတိုင် Browser ကိုအများအပြား devices များပေါ်တွင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
သငျသညျအပလီကေးကြိုက်နှစ်သက်ပါလျှင်မဟုတ်ရင်သင့်ရဲ့အကြံပြုချက်များနှင့် bug အစီရင်ခံနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်တစ်စောင်ပေးပို့နိုင်ပါတယ်သင့်ရဲ့သုံးသပ်ချက်ကိုပေးစေခြင်းငှါမေ့လျော့ကြဘူး monumentbrowser@outlook.com
မော်ကွန်းတိုင် Browser ကို: Adblock & Fast Downloads
1.32 ကို MB
မာစဲလိုက de Souza အားဖြင့် Apps ကပ